Dib-u-fiirinta WKG, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Herbert W. Armstrong wuxuu dhintey Janaayo 1986 isagoo 93 jir ah. Aasaasaha Kaniisadda Adduunka ee Ilaah wuxuu ahaa nin cajiib ah, oo leh khudbad cajiib ah iyo qaab qoraal ah. Wuxuu ka dhaadhiciyay in kabadan 100.000 oo qof tarjumaadiisa Kitaabka Quduuska ah wuxuuna dhisey Kaniisadda Dunida oo dhan ee Godka idaacadda / telefishanka iyo Boqortooyada daabicidda oo gaartay ugu badnaan 15 milyan oo qof sanadkii.
Adkeyn xoog leh xagga waxbarista Mr. Armstrong waxay ahayd aaminsanaanta in Kitaabka Quduuska ahi leeyahay awood ka badan tan dhaqanka. Natiijo ahaan, WKG waxay qaadatay tarjumaadeeda ee Qorniinka meel kasta oo fikradeeda ay kaga duwan tahay dhaqanka kaniisadaha kale.
Ka dib markii Mr. Armstrong dhintay 1986, kaniisaddeenu waxay sii waday barashada Kitaabka Quduuska ah, sida uu ina baray. Laakiin waxaan si tartiib tartiib ah u ogaanay inay kujirto jawaabo ka duwan kuwii uu hore baray. Mar labaad, waa inaan kala dooranno Kitaabka Quduuska ah iyo dhaqan - markan oo udhaxeysa Kitaabka Quduuska ah iyo caadooyinka kaniisadkeena. Mar labaad ayaan dooranay Kitaabka Quduuska ah.
Waxay noo ahayd bilow cusub. Ma aysan fududaan oo degdeg uma ahayn. Sannadba sanadka ka dambeeya, khaladaadka caqiido ayaa la helay iyo sixitaanno la sameeyay oo la sharxay. Hadal ku saabsan wax sii sheegidda ayaa lagu beddelay wacdinta iyo baridda injiilka.
Waxaan u yeeri jirnay Masiixiyiin kale oo aan qarsoonayn, hadda waxaan ugu yeernaa saaxiibo iyo qoys. Waxaan luminay xubno, asxaabteena, waxaan luminay barnaamijyadeena raadiyaha iyo telefishanka iyo ku dhawaad ​​dhammaan qoraalladeenna. Waxaan luminay wax badan oo mar ahaa mid aad noo jecel oo aan ku qasbanahay inaan "gurguurto si aan iskutallaabno" marar badan. Sabab? Sababtoo ah Baybalku runti wuxuu leeyahay awood ka balaaran caadooyinkeena.
Isbeddelada caqiidada ayaa qaatay 10 sano - 10 sano oo jahwareer ah, iyo dib-u-barasho aad u weyn. Dhammaanteen waxay ahayd inaan dib u milicsano nafteena, dib uga fikirno xiriirka aan la leenahay Ilaah. Isbeddelka naxdinta leh ee xubnaha badankood dhacay wuxuu dhacay 10 sano ka hor - markii daraasaddeenna aan sii wadnay ee Baybalka ay noo muujisay in Ilaah uusan mar dambe u baahnayn dadkiisa inay dhawraan Sabtida toddobaad iyo sharciga kale ee Axdigii Hore.
Nasiib darrose, xubno badan ayaan aqbalin tan. Dabcan, waxay xor u yihiin inay dhawraan sabtida haddii ay rabaan, laakiin qaar badani kuma faraxsanayn inay joogaan kaniisad aan dadka uga baahnayn inay xajiso. Kumaan kun ayaa ka baxay kaniisadda. Dakhliga Kaniisadda ayaa si weyn hoos ugu dhacay sannado, taas oo nagu khasabtay in aan ka tagno barnaamijyada. Kaniisadda ayaa sidoo kale lagu qasbay inay si weyn hoos ugu dhigto tirada shaqaalaheeda.
Tani waxay u baahday isbeddel weyn oo ku yimid qaab dhismeedka hay'addeenna - haddana mar kale ma aysan fududaan oo dhaqso uma ahayn. Runtii, dib-u-habeyn ururkeenna waxay qaadatay illaa inta dib-u-eegista caqiido. Guryo badan ayaa la iibin jiray. Iibinta dhismaha xarunta Pasadena ayaa dhowaan la soo gabagabeyn doonaa, waxaan ku duceyneynaa, iyo shaqaalaha xarunta kaniisadda (ku dhawaad ​​5% shaqaalihii hore) waxay u guuri doonaan dhisme xafiis oo ku yaal Glendora, California.
Beel walba sidoo kale dib ayaa loo abaabulay. Intooda badan waxay leeyihiin wadaaddo cusub oo shaqeeya lacag la'aan. Adeegyo cusub ayaa horumaray, badiyaa hoggaamiyeyaal cusub. Maamuleyaashii Multilevel waa la baaba'ay oo inbadan oo xubno ah ayaa qaatay door firfircoon markii ay beeluhu kaqeyb galayaan beeshooda. Golayaasha bulshada waxay bartaan inay ka wada shaqeeyaan samaynta qorsheyaal iyo dejinta miisaaniyad. Waa bilow cusub oo innaga mid ah.
Eebbe wuxuu rabay inaanu badalno isaguna wuxuu na dhex mariyey daruuro qulqulaya, maroojin qalqalloocsan iyo hirar kacsan oo dhaqso badan sida aan u socon karno. Waxay i xasuusineysaa kartuun kartoon xafiis ku dhawaad ​​sideed sano ka hor - waaxda oo dhan waa la burburiyey shaqaalihii ugu dambeeyayna gidaarka ayuu ku dhejiyay. Waxay tustay roog roog, kaas oo ay fadhiyeen qof indho aad u ballaaran, oo kursiga ku dhegan ayaa ka walaacsan noloshooda mudan. Cinwaanka hoos ku qoran kartoonku wuxuu ahaa: "Baxsashada duurjoogta wali ma dhamaan." Sidee bay sax u ahayd taasi! Waxay ahayd inaan u dagaallanno nolosheena dhowr sano oo kale.
Laakiin hadda waxay umuuqataa inaan buux dhaafney buurta, gaar ahaan iibinta guryaha ku yaal Pasadena, u soo guuritaankeena Glendora iyo dib-u-qaabaynta ayaa bulshada maxalliga ah ka siisay mas'uuliyad dhaqaale iyo howlahooda. Waxaan ka tagnay raadadkii hore oo hadda waxaan ku bilownay bilow cusub oo wasaaradda uu Ciise noogu yeeray inaan sameyno. 18 kaniisadood oo madaxbannaan ayaa nagu soo biiray oo waxaan aasaasey 89 kaniisadood oo cusub.
Masiixiyaddu waxay qofkasta u keentaa bilow cusub - safarkuna had iyo goor ma aha mid qumman oo la saadaalin karo. Urur ahaan, waxaan leenahay wareegyadeena, leexleexdeenna, biloow been ah iyo U-leexanno. Waxaan soo marnay wakhtiyo wanaagga iyo wakhtiyada dhibaatooyinka. Nolosha masiixiga badanaa waa la mid shaqsiyaadka - waxaa jira waqtiyo farxad, waqtiyo walwal ah, waqtiyo wanaagsanaanta iyo wakhtiyada mashaqada. Caafimaadka iyo jirada waxaan ku raacaynaa Masiixa buuraha iyo dooxooyinka.
Joornaalka cusub ee la socda warqaddan ayaa ka tarjumaya sida aan la saadaalin karin nolosha Christian. Masiixiyiin ahaan waxaan ognahay halka aan u soconno, laakiin garan mayno waxa ku dhici kara jidka. "Christian Odyssey" (joornaalka cusub "Christian Odyssey") wuxuu soo bandhigi doonaa xubnahan iyo sidoo kale xubno aan kitaab lahayn, kitaab, caqiido iyo qodobo la taaban karo oo nolosha Christian ah. In kasta oo qodobbada noocan oo kale ah ay horay uga soo muuqdeen Wararka Dunida, waxaan go'aansannay in aan kala saarno wararka kaniisadda iyo barista kitaabiga ah anagoo abuurnay laba joornaalo. Sidan, Christian Odyssey wuxuu awood u yeelan doonaa inuu u adeego dadka aan xubin ka ahayn kaniisaddayada.
Warka kaniisadda waxaa lagu daabacay joornaalka "Maanta WCG" ("WKG Maanta") waa la daabici doonaa. Xubnaha WKG ee Mareykanka waxay sii wadayaan helitaanka labada joornaal iyo weliba warqad aniga iga socota. Kuwa aan xubin ka ahayn (gudaha Mareykanka) waxay ka dalban kartaa rukunka “Christian Odyssey” taleefan, emayl ama khadka tooska ah. Waxaan jeclaan lahayn inaan kugu dhiirigelinno inaad la wadaagto joornaalka Christian Odyssey asxaabtaada oo aan kugu martiqaadno inay dalbadaan rukumadooda.